Fitetezam-pirenena : tsy manadino ny eto an-tanindrazana i Erick Manana sy Dama | NewsMada
Ny iray andrin’ny tarika Mahaleo, ny iray kosa mpikambana ao amin’ny Lôlô sy ny tariny. Samy manana ny hanitra ho azy, kanefa efa ela nampiarahana tadin-gitara i Dama sy Erick Manana.
Efa nanomboka ny faramparan’ny volana oktobra no niara-dia nitety firenena maro i Dama sy Erick Manana. Nizara ny kanto malagasy, amin’ny alalan’ny feo sy ny gitara izy ireo. Fantatra fa tafiditra anatin’ny fandaharam-potoan’izy mirahalahy ireto amin’izao fihodinana lavabe izao koa ny eto an-tanindrazana. Seho roa no efa raikitra, ny zoma 11 marsa izao manomboka amin’ny 7 ora hariva, sy ny alahady 13 marsa manomboka amin’ny 3 ora tolakandro. Vahinin’i Erick Manana sy Dama mandritra ireo seho ireo i Voara (Fangia Kalo Gasy) sy i Jenny Führ.
Mbola tena ao anatin’ny fihodinana tanteraka ireto mpanakanto anisan’ny mamiratra eto sy any ivelany ireto, amin’izao fotoana izao. Hisehatra any Montpellier izy mirahalahy rahampitso, ao Toulouse ny 20 febroary, Marseille ny 26 febroary ary Lyon ny 27 febroary. Efa nandalo tany Montréal, Allemagne, Suisse ary nitety tanàn-dehibe maro ao Frantsa, toa an’i Paris, Rennes, Dijon, Laval, Rouen, Nancy, sns, izy ireo.
« Feo roa, gitara roa »
« Deux voix, deux guitares ». Anaran’ilay rakikira iombonan’i Dama sy Erick Manana io. Mirakitra hira 12 izany, izay sanganasan’izy mirahalahy avokoa. Anisan’ireny ny « Raha mba manana elatra », « Mbola ho avy », « Tsy ferana », « Zaza sary », sns. Avy amin’izay ihany no nakana ny anaran’ny fampisheoana « Feo roa, gitara roa », izay hotontosain’izy ireo eto Antananarivo.
Une réponse à "Fitetezam-pirenena : tsy manadino ny eto an-tanindrazana i Erick Manana sy Dama"
ratotah 20/02/2016 à 01:47
Mankasitraka ho azy roa lahy,ary misaotra ny namana Zo Ny Aina nampita-baovao…